म्याराडोनाको मुटु आधा किलोको थियो, मुटु निकालेर गरिएको थियो अन्तिम संस्कार, मृत्यु भएको धेरै समयपछी बाहिरियो यस्तो रहस्य ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/म्याराडोनाको मुटु आधा किलोको थियो, मुटु निकालेर गरिएको थियो अन्तिम संस्कार, मृत्यु भएको धेरै समयपछी बाहिरियो यस्तो रहस्य !
म्याराडोनाको मृत्युको कारण अझै स्पष्ट भएको छैन, र उनको उपचारमा सं’ल’ग्न डाक्टर विरुद्ध ल्याइएको आरोपको पनि अनुसन्धान गरिएको छ। यद्यपि, हालैका दिनहरूमा डाक्टर र पत्रकार, नेल्सन क्यास्ट्रोले लेखेका पुस्तकका अंशहरूले म्याराडोनाको मृत्युको वरिपरि केही अचम्मलाग्दो विवरणहरू विस्तृत गरेका छन्।
उनले उल्लेख गरेका छन् की त्यहाँ एउटा यस्तो समूह थियो जसले उनको मुटु निकाल्ने योजना बनाएको थियो, क्यास्ट्रोले एल ट्रेससँगको अन्तर्वार्तामा यो कुरा बताएका हुन् । त्यो सफल हुन सकेन किनभने मानिसहरूले थाहा पाए कि यो हुन गइरहेको छ त्यसैले म्याराडोनाको मुटु त्यती बेला निकालिएन । उनको मुटु अन्य मानिसको भन्दा निकै ठूलो थियो । सामान्य मानिसको मुटुको तौल ३०० ग्राम हुन्छ भने म्याराडोनाको मुटुको तौल आधा किलोको थियो ।
तर उनको निधन पछि मुटु निकालिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो पनि अध्ययनको लागि निकालिएको थियो, किनभने उनको हृदय मृत्युको कारण निर्धारण गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, स्पष्ट रूपमा, जानकारी यो छ कि उहाँ मुटु बिना गा डि एको हो।ू